Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Nigeria Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubada cagta oo sida ugu fiican loo yaqaan Nickname; 'Chapman'. Dabeecadeena Mikel Obi iyo sheeko xariifin aan toos ahayn ayaa xaqiiqda kuugu keenaya xisaab buuxda oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Carruurnimada Hore
John Michael Nchekwube Obinna oo loo yaqaan John Obi Mikel, John Mikel Obi ama Mikel John Obi ayaa ku dhashay 22nd April 1987 ee Jos by Pa Michael Obi, oo ah hawlwadeen ka howlgabay hooyadii, Mrs Irosu Obi, haween ganacsi ah.
Mikey sida dadku u yaqaanay inta lagu jiro xilligii carruurnimadiisii, wuxuu ahaa ilmo uur leh muddo dheer ka hor inta uusan ku dhicin stardom. Sida wiil yar oo ah shaqaale qaran oo yar yar, wuxuu ku noolaa nolol yar inta badan dhalashadiisa. Waxa uu lahaa hibo, dabeecad iyo dulqaadka.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Siday u socotay safarka kubbadda cagta
Dhammaantood waxay bilaabeen markii tiknoolajiyadiisu markii ugu horreysay laga helay kubbadda cagta ee boodhka ee dugsiga hoose ee Jos Metropolis Township Primary School oo uu ka qaybgalay. Waxaa markii ugu horeysay lagu arkayay Alhaji Babawo Mohammed Adamu, oo ah nin hodan ah iyo wakiil kubada cagta ah oo ku noolaa meel u dhow garoonka.
Wareysi gaar ah, tani waa waxa Alhaji Babawo Mohammed Adamu uu yiri;
"Waxaan dhihi karaa iyada oo aan wax is burin ah oo aan ahay qofka isaga helay (John Mikel Obi) markii uu ahaa ilmo yar. Waxaan ku taageeray siyaabo badan oo aan u noqon karo waxa uu yahay maanta. Waxa uu ka ciyaarayay waddada agagaarkeyga ah halkaasoo aan soo xushay oo aan caawiyey. Waxaan xusuustay maalintii ugu horeysay ee aan arko, waxaan u yeeray isaga oo waxaan u sheegay wixii aan isaga ku arkay. Waxaan go'aansaday inaan ka caawiyo isaga oo aan qoyskiisu ahayn kuwo xayawaan ah si ay u kafaala qaadaan, ayuu shegay.
Dhibco badan ayaan marnaba la siinin doorka muhiimka ah ee Adamu oo ku ciyaaray xirfadlaha isboortiga ee Obi. Inkasta oo uusan marnaba lakulin, sida uu had iyo jeer sheegayo inuu leeyahay faham maskaxeed oo wax ku ool ah.
Sida laga soo xigtay Alhaji Babawo Mohammed Adamu
"Mikel caadi ahaan wuxuu ku baaqayaa inuu raadsado talo, waxaana kula talinayaa waxa aan ogahay inuu u fiicnaan doono labadiisa xirfaddiisa iyo arrimaha kale. Dhanka kale, waxa uu sidoo kale ka hadlay dhibaatada uu ka qabo Chelsea, islamarkaana aan la yaabin sida uu ugu dhaqaaqayo China. Dabcan dad badani waxay leeyihiin fikrado kala duwan, laakiin Mikel waa nin aad u wanaagsan; isagu waa qof u gooni ah, xishoodaa mararka qaarkoodna aad u saaxiibtinimo. Oo waa ciyaaryahanka keliya ee aan aqaano cidda ixtiraamaysa asxaabtiisii ​​hore iyo wali waxay la joogtaa ilaa taariikhda. Wuxuu yahay qof jecel inuu caawiyo kuwa aan mudnaanta yareyn iyo sidoo kale asxaabtiisa, gaar ahaan saaxiibadiisa hore ".
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Xiriirka
Mikel iyo quruxda Ruush, Olga Diyachenko ayaa tan iyo intii uu 2013 la kulmay ka dib markii ay kula kulmeen London.
Markii ay wada kulmeen, Mikel waxa uu si dhaqso ah u jecel yahay Olga Diyachenko Alegra, kaas oo aabahiisa uu yahay bilyaneerka reer Ruushka ah ee la xirira ganacsiyada London. Wuxuu ku faanaa boqoradda Ruushka inuu ku fiicnaado inuu ku cuno cuntooyinka Nigerian.
Mikel Obi, xaaska / Walaashaha iyo aabaha, walaalkiis Inlaws
Xidhiidhka uu la leeyahay isaga ayaa bilowday wax yar ka dib markii uu dhamaaday xiriirkiisa muddada fog ee caanka ah ee nigerian Delta Soap quruxda boqor, Sandra Okagbue.
Nigerian model, actor iyo ganacsade ka soo jeeda Anambra state waa odayga lix caruur ah iyo gabadha la yiraahdo Obi (King) ee Onitsha, Nigeria Ofala Okechukwu Okagbue.
Waxay ahayd marxaladii quruxda badan ee Miss Delta Soap ee loogu talagalay 2010 oo ay abaabushay Drug Orange.
"Labada shimbir ee jacaylka ah ee ka soo jeeda sanadihii 3 mar ayaa go'aansaday in ay xiraan xiriirkooda. Jacaylkoodu waa sii xoogaystay maalintii uu Sandra u guuray qadka dhexe ee Chelsea isagoo ku sugan gurigiisa UK.
Tilldate, cidna ma oga waxa khaladka u galay labada shimbir ee jacaylka. Midna cidna ma yaqaano ciddii qalbiga ka jabtay iyo sababta uu Mikel u go'aansaday inuu dego gabadh cad oo cadaan ah. isla markiiba ka dib markii ay burburtay, Sandra wuxuu si deg deg ah u daabacay gabal dhaadheer oo lagu diidey xiriirka uu la leeyahay xiddiga kubadda cagta.
Sida laga soo xigtay iyada, "Tani waa inaad u sheegto guud ahaan dadweynaha in sheekooyinka hadda ee ku saabsan arooska la soo jeediyey ee u dhexeeya I, Sandra Okagbue, iyo Mikel Obi, waa gebi ahaan khaldan. Marna ma jirin qorshe noocan oo kale ah oo midkeennu midkeennu ogolaanayno heshiis, ama xataa taariikhda arooska sida la sheegay. "Wax run ah ma jiraan wararka sheegaya in Mikel Obi iyo aniga aan guursan doono."
"Waxaa jiray sheekooyin been abuur ah oo igu saabsan aniga waraaqaha, iyo dhowr blog. Magacaygu waxaa lala xiriirinayaa dhowr qof oo la iigu haysto si loola socdo. Qaar ka mid ah warbixinnada beenta ah ee xitaa waxay u baxeen sida ugu dhaqsaha badan ee sheeganaya in gurigeyga gurigaan ay iibsadeen khayaali kooxo. Tani waa caqli-gal. Waxaan ka imid sumcad qoyska boqortooyada iyo, waxaan nahay dad aad u adag. Waxaan ku guuleysanay dhammaan wixii aan qabannay iimaanka Ilaah iyo shaqo adag. "
"Waxaan jeclaan lahaa in aan soo sheego dumarka ixtiraam leh iyo raali gelinta saxaafadda si aan uga farxiyo had iyo jeer si rasmi ah u xaqiijiyaan wax kasta macluumaad waxay jeclaan lahaayeen inay daabacaan aniga iga hor daabacaya. "
"Waad ku mahadsantahay taageeradaada caadiga ah."
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Isku dubarid Olga
Mikel ka dib markii uu jabsaday ayaa ku quudiyey gabdhihii Nigerian ee xiriirka furan. Waxa uu ku khasbanaaday inuu la dego qof uu dareensan yahay inuu siin doono nabadgelyo maskaxeed iyo walwal ka yareeya inta badan isaga oo tixgelinaya dhaqaalaha dalkiisa hooyo. Tani waxay ahayd markii gabadha bilicda ah ee Olga soo galay noloshiisa.
Sida laga soo xigtay Mikel."Naftaydu waxay igu dhufatay qalbigayga, qalbigayguna qalbigayguna wuu ka qoslaa. Ugu dambeyntii waxaan ugu qosliyay qosolka hodanka ah ee qalbigeyga murugada leh ". Dad badan oo Nigerian ah oo jecel in ay jecel yahiin ninkooda ayaa dareemay niyadjab markii uu Mikel u guuriyey gabadh caddaan ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah wali waxay fahmayaan sababta uu u sameeyay go'aankaas.
Maaddaama tirada dadka reer Nigeria ay dhigi doonaan, - waxaa la fahamsan yahay in marka dadku hodan yihiin, dhammaan waxay doonayaan waa inay isku ururiyaan hantida halkii ay qaybin lahaayeen hantida. Waxay u egtahay in ay aad ugu tagaan xaaska raaxada si ay u yareeyaan ujeedka ay u leeyihiin inay u qaybiyaan hantidooda qoyskooda saboolka ah. Tani waa kiiska Mikel sida dad badani ay dhihi lahaayeen.
Mikel iyo Olga waxay wada koraan labadoodaba tan iyo markii ay ku kulmeen London. Waxay barteen sida wax loo barto iyo sida waligeed iskuma dayin.
Labada dhinacba waxa ay go'aansadeen in ay ilmo u yeeshaan dalab si ay u abuuraan dammaanad weligeed ah. Marka laga soo tago filashooyinkooda waxay yimaadeen laba gabdhood.
Ka dib markii hooyada dib looga soo celiyay cusbitaalka waxaana la weydiistay asxaab ku saabsan sida uu dareemayo gabdhihii mataanaha ahaa, Mikel ayaa soo degay, oo wuxuu ku nasanayaa palmkiisa iyaga oo ku xiga;
"Inaad leedahay gabadh mataano ah, waxaad ku arkeysaa waxyaabo kala duwan. Waxay u egtahay jacaylka mar kale ".
Mia iyo Ava waxay u keceen inay noqdaan kuwo dahab ah indhaha waalidkood.
Mikel Obi Waaweyn, Ava iyo Mia
Ka fiirsashada koritaanka waa neefsanaan. Xaqiiqdii, erayadu kuma filna inay muujiyaan jacaylka aan shuruudaha lahayn ee Mikel leeyahay qoyskiisa.
Mikel Obi's Family
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Afduubka aabaha
Mikel's dad, Pa Obi ayaa waxaa afduubay laba askari oo ka tirsan ciidamada Nigeria kuwaasi oo dalbaday lacago madax furasho ah oo ah $ XNYX si amaanka loo sii daayo.
Askarigu waxay lahaayeen ciidan hawlgal ah oo loo xilsaaray in ay ilaaliyaan Jos, oo ah magaalo caan ah oo ay dhibaato ka haysato qowmiyadda iyo diinta. Laakiin halkii laga sii wadi lahaa nabadda, askartu waxay adeegsadeen baabuur militari si ay u joojiyaan Michael Obi isaga oo gurigiisa uga soo cararay shaqada isaga oo ka cararay.
Tani waxay ahayd sida ay dhacdadu u dhacday sida uu sheegay taliyaha bilayska, ayuu yiri Ayeni .-- Askartu waxay u sheegeen Mr Obi in ay rabeen inay arkaan. Cabsi la'aan, wuxuu u baxay inuu la kulmo taliyaha ciidamada ee baabuurta. Waxay si dhakhso ah isaga u kaxeeyeen baadiyaha weyn halkaas oo uu si xun u garaacay. Isagoo u duulaya wuxuu ahaa inuu cabsi ku galo isaga oo u maleynayay in ay ka dhigi lahaayeen kuwo jaahwareer ah. Afduubayaasha ayaa u sheegay Mr Obi "in ay bixiyaan $ 4bn (£ 2.4bn), taas oo ay ku tilmaameen 'beddelka hilibka' Mikel, kooxdiisa Chelsea iyo ugu muhiimsan, milkiilaha Roman Abrahimovic. Waxaan rumeysanahay in Chelsea FC ay tahay mid aad u hodon ah mudadaas, Ayeni ayaa yiri. Nimankeygii ayaa soo weeraray meel ka baxsan Kano halkaasoo afduubayaashu ay aabe u ahaayeen Mikel aabbihii, isaga oo xoreeyey iyo lixda qof ee lagu tuhunsan yahay afduubayaasha oo ay ku jiraan hal askari oo haween ah.
Afduubayaasha aabbaha Mikel Obi
Mikel ayaa sheegay in afduubku uu ku naxay sababtoo ah qoyskiisa marnaba wax dhibaato ah oo hore ka qabin.
Pa Obi ayaa u sheegay suxufiyiinta:
"Waxaa jira shan ka mid ah iyaga oo dhar labisan dharka ciidanka. Marka ay u soo dhowaadaan si ay u muujiyaan waraaqaheyga gaadhiga, waxay isla markiiba igu riixeen gaari ay ku rinjireen midabada milatariga waxayna bilowday in ay si dhakhso ah u socoto.
Marnaba ma ogin in gaari uu u duuli karo sidan oo kale. Tani waxay ahayd markii ay maskaxdayda ku dhacday in aan la afduubay. Isla markiiba waan ogaa in ay ahayd afduub, waxaan bilaabay in aan iyaga u naxariisto iyaga, laakiin waxay igu adkaysteen inay i garaacaan. Waxay iiga dhigeen meel aad u xun. Weli ma aqaano sida aan u adkaystay. "
Waqtigii uu waayay aabihii, Mikel ayaa ku adkeyd inuu sii wato inuu u ciyaaro Chelsea - isagoo kulankiisii ​​ugu horeysay ka horyimid Stoke City iyo West Bromwich Albion. Markii uu arkayay aabihiis ayaa la sii daayay, wuxuu si deg deg ah ugu baxay shabakad si uu ugu mahadceliyo qof walba oo reer Nigeria ah, qoyskiisa iyo asxaabtiisa, Chelsea FC iyo taageerayaashooda iyo wakiiladiisa taageeradooda guud ee waqtigaan aadka u adag.
Tababaraha Chelsea Andre Villas-Boas ayaa amaanay "Taabasho adag oo maskaxeed" oo uu soo bandhigay ciyaaryahanka khadka dhexe ka dib markii uu aabbihii afduubay.
Chelsea ayaa lagu yiri war qoraal ah: "Mikel waxa uu muujiyay dadaalkiisa iyo xirfadkiisa inta lagu jiro waqtigan ugu adag, waxaana kooxda sii wadi doonaa inay siiso taageerada buuxda ee isaga iyo qoyskiisa."
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xiriirka lala leeyahay Haweenka Nigerian
Mikel ayaa lagu eedeeyay inuu jaceyl ku dhisan yahay xiriir la leh tiro yar oo ka mid ah celebs iyo gabdho aan qurux badneyn oo ka yimid Nigeria.
Mikel Obi iyo Genevieve - Sheekold Untold
Mikel Obi iyo Genevieve Nnaji ayaa bilaabay xiriirkooda shaqo markii ay labadooduba saxiixeen Amstel Malta oo ah danjirayaal. Mikel waxa uu ka hadlayey qaybta sawir-qaadka si uu u nadiifiyo xanta waraysiga inta lagu jiro dhacdo loogu talagalay nooca Breweries Nigerian ee Lagos.
"Waxaan wada shaqeynaa, waa xiriir shaqo". "Anstel Malta waa ay taageereen, waa qof aad u fiican; Waxaan la hadlay dhowr jeer iyada oo ay tahay qof aad u qurux badan. "
Mikel Obi ayaa mar uun loo yeeray Marry Rita Dominic.
Sida laga soo xigtay dad badan oo arkay sawiradooda, waxay u muuqdaan kuwo ka badan saaxiibo caadi ah.
Waxa uu mar kaliya u duulay Abuja isla markiiba ka dib markii uu ka dhacay ciyaarta Calabar si uu u arko. Labadaba ayaa la arkay labo jeer kadib. Labada marba waxay u muuqdaan sawir, taasoo sababtay in qaar ka mid ah afafka ay ku dhuftaan in labada xiddigoodba ay u muuqdaan kuwo is jecel oo ay noqon karaan cayaar aad u wanaagsan, oo lagu xukumo sawirka sawirka.
Inta badan dadka reer Nigeria, waa wax aan macquul aheyn in labadaan nin ay si fudud uga dhex muuqdaan kuwa kale ee Nigerian Nollywood-ka ah ee London ku noolaa iyagoo aan cidna u ogolaaneynin in Mikel oo mar waliba jadwal u dhigo.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Weerarkii Instagram ee gabdhaha Nigerian ee Gabdho
Gabdhaha gabdhan ee gabdhaha Nigerian ah ayaa u isticmaala in ay aflagaaddo saaxiibka Mikel ee Olga (Olga) Instagram. Mikel waa xayawaan weyn oo ah dumar badan oo reer Nigeria ah, dhab ahaantii way jecel yihiin xaqiiqda ah inuu u baxay gabadh caddaan ah.
Mar labaad markii uu xaaskiisa u soo dhiibay inuu cuno Spaghetti oo leh mid ka mid ah gabdhahiisa labadaba, gabdhaha Nigerian waxay qabsadeen weerarka kale. hoos eeg;
Weerarkii Olive Instagram
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Si qarsoodi ah u dhigaya Laba Caruur
Waxaa la soo wariyay in Mikel Obi uu ahaa aabe qarsoodi ah oo laba caruur ah ka dib markii xiriirka gaaban la yeeshay laba haween ah. Wararka ayaa sheegaya in uu leeyahay gabadh ka weyn wiil yar iyo gabadh yar oo uu ka soo jeedo dabka dadweynaha. Moreso, wuxuu mar uun iibsaday £ 500,000 hantida ku yaal London ee wiilkiisa iyo hooyada wiilka.
Sidoo kale, ilmo kale oo qarsoodi ah, gabadh iyo hooyadeed 23-sano jir ah ayaa la sheegay inay ku nool yihiin Koonfurta England. Hase yeeshee labadii dumar ah ee la wariyay lama oga midba midka kale.
The Sun ayaa Axaddii sheegtay in Mikel uu la kulmay wiilkiisa hooyadiis xaflad London ah. Ka dib markii ay dhalatay, ilo ayaa yiri, Mikel 'waxay ogolaatay in ay bixiso tobanaan kun oo sannadkii si ay u ilaaliso' iyo 'oggolaatay in ay siiso baabuur cusub saddex ilaa shan sano.'
"Wuxuu sheegay inuu doonayo inuu door ka qaato noloshooda. Isaga iyo hooyada waxay ku jiraan shuruudo saaxiibtinimo, mana dareemayso dareen xun xun isaga, malaha sababtoo ah wuxuu si fiican u xanaaneeyay.
Saaxiib dhow oo ubadkiisa hooyadiis mar hore yiri: 'Ma ahan qoys ka tirsan qoysaska oo aan wali wax badan kasbeyn, laakiin waxay ku socotaa baabuur cusub. Waxay u muuqataa in ay lacag soo gashay tan iyo markii uu wiilka yaraa. Waxaan xaafaddeena ogsoonahay in ay sii wadi doonto qandaraas hoose. '
Si kastaba ha ahaatee, afhayeen u hadlay kubada cagta ayaa laga soo xigtay Sun on Sunday sida uu yiri: 'Tani waa arrin gaar ah oo gaar ah. Yooxanaa wuxuu bixiyaa oo daryeelaa carruurtiisa wuxuuna sii wadi doonaa inuu sidaas sameeyo. Wuxuu ka codsanayaa in asturnaantooda la ixtiraamo. '
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Ixtiraamidda Suxufiyiinta Nigerian
Isaga wuxuu ahaa "isku-dulqaadasho, ixtiraam la'aan iyo dabagal '
Mikel Obi: "Anigu kama xanaaqo Warbaahinta Nigerian markay mararka qaarkood qoraan waxa qalad ah, waxay u eg yihiin inay shaqadooda qabanayaan. Waxay doonayaan inay iibiyaan waraaqahooda. Anigu ma dhahayo Mikel waa wax laakiin marka ay dadku arkaan Mikel bogagga hore ee wargeysyada, waxay tagaan oo iibsadaan waxaanan qabaa inay wax badan ka sameynayaan taas.
"Waxaan jeclahay in aan la hadlo saxaafadda, laakiin waan jeclahay marka arrimuhu si sax ah u socdaan, waxaan jeclahay in aan la hadlo saxaafadda, laakiin waxaan ahay qof mashquul ah oo sidoo kale leh jadwal, sidoo kale ma iman kartid Mikel waxaan doonayaa inaan kula wareysto, wax walbaa looma dhicin, hadey arrimuhu si fiican u qabtaan, waan ixtiraami doonaa dadka, waan samayn doonaa wareysi, laakiin haddii aan si habboon loo habeyn, ma i soo kulmi karaan meerida hoteelka , waxaad la kulantaa wadooyinka waxaanan leeyahay waxaan rabaa inaan kula hadlo, ma shaqeyneyso sidaas".
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Arrimaha leh lahaanshaha 5 Bentleys
"Hal shey waxaan hubaa inaanan tagin waraaqaha Nigerian, ma ahan inaanan daryeelin, laakiin wuu iigu yeedhay, wakiilkeyga ayaa iigu yeedhay, wuxuu joogaa Nigeria, wuxuu igu yiri aniga waxaa jira warar sheegaya inaan heysto shan Bentley, Waxaan la mid yahay waxa, shan Bentley, maxaan sameyn doonaa Shan Bentley, dhammaantood waa baabuur isku mid ah mise waxay yiraahdeen waxaan yeelan karaa shan midabo kala duwan kadib.
"Waxaan u maleynayaa inay hoos u dhacdo marka aad si fiican u qabaneyso, marka arrimuhu si fiican kuu socdaan, waxaad noqotaa waxa dadka aysan fileynin inaad noqotaan, waxa ay dadku filayaan inaad ku guuleysato, waxaad ogtahay in ay had iyo jeer socdaan hadana xitaa waxay ku xiran tahay sida aad u maareyn karto naftaada, xitaa waxaad iska xakameysaa waxyaabo aan kuu fiicneyn, waxaan doonayaa inaan ciyaaro kulankaan muddo dheer, waan jeclahay Chelsea, waan jeclaan lahaa si aan ugu dhameysto xirfadeyda halkan Chelsea, laakiin waxa ay ku xiran tahay waxa dhaca, kaasoo imaanaya oo tagaya, waa kubada cagta, waan arki doonaa waxa mustaqbalka uu heysto. "
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Kuubashada Nigerian Celebrity
Mikel ayaa marar badan lagu eedeeyay in uu hareer mabnuuc ku ahaa fanaaniga caanka ah ee Nigerian, 2face isagoo diidan in uu gacan ka geysto kooxda london. Sida laga soo xigtay wargeyska Nigerian.
Mikel Obi Vs 2Face - Sheekada aan la sheegin
"2face waxa ay la kulantay Mikel oo ka tirsanayd koox ka socota London habeenkii, waxaana uu u soo ciyaaray kubada cagta, laakiin mulkiilaha ayaa ku dhaleeceeyay. Tani way ka careysiisay. 2face ayaa dareemay dhaawac aad u daran, wuxuu aaday istuudiyaha, cabashadana wuxuu ku dhajiyay wax miir. "
Astaanta muusikada ayaa sii waday inay sii daayaan heeso cinwaankeedu yahay "Aniga oo kaliya" kaas oo lahaa oo ku hadlaya afkiisa Nigerian PIDGIN luuqad (ma ahan qof kasta sabi ciyaar kubad). It uu leeyahay SHARCIGA SOOMAALI; (Qof kasta ma yaqaano sida kubadda cagta loo ciyaaro).
2Face, wareysi dhowaan la leh Brila FM, ayaa ku dhuftay wararka sheegaya dhacdadaas oo kale dhacdadaas oo ay ku adkeysaneyso in heesta aysan waligeed kala sooc lahayn ama ku saabsan Mikel. 2Baba ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in markii uu maqlay warka ku saabsan warkaasi wakhtigaas, wuxuu wacad ku maray qadka dhexe ee khadka dhexe, waxaana ay ku dhamaatay inay qosol badan yihiin.
Wuxuu yiri: "Waqtigaas oo aan sameeyay heesaha, Mikel waxa uu dhibaato ku qabay inuu soo bandhigi karo ciyaaraha Super Eagles qaar ka mid ah, ka dibna qaar ka mid ah wargeysyada aadka u wanaagsan ayaa soo xushay line-ka gabayga aan ku haysanay wadanimada umadda oo matalaya xulka kubadda cagta ee qaranka iyo sheekada sheekada oo ka mid ah tartan noo dhexeeya, waxaan la hadlay Mikel telefoonka waxaanan ku qoslnay arrin wanaagsan. "
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Wajiga baabuur wadidda
Mikel ma ahan inuu ciyaaro kulanka isagoo ciyaaraya ganaax. Waxa uu go'aansaday inuu u baxo casho kadib markii uu cunay afar ilaa shan koob oo khamri ah ka dib markii uu daawaday kooxdiisa oo ku ciyaareysa Stamford Bridge.
Waxaa la ogaaday in uu ku dhawaad ​​laba jeer xadka markii uu booliisku joojiyay garaashkiisa Range Roger ee Fulham Road, galbeedka London. Garsooraha degmada Jeremy Coleman ayaa ka mamnuucay in uu u wado bilihii 15 isaga oo amar ku bixiyay in uu bixiyo £ 1,580 ee Maxkamadda Magistrates-ka ee Galbeedka London.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Michael / Mikel Mistake
Intii lagu guda jiray diyaarinta 2003 FIFA ee Under-17 World Championships, kubadda cagta Nigeria ayaa si khalad ah u gudbiyay "Michael" oo ah "Mikel" tartanka Finland.
Waxa uu go'aansaday in uu magac cusub magaciisa dhigo, isaga oo sheegay in ay leedahay giraan gaar ah. On 31 July July 2006, wuxuu sheegay inuu jecel yahay in loo yaqaan Mikel John Obi halkii uu ka noqon lahaa John Obi Mikel, isaga oo inta badan loo yaqaan. Isku darka waa in la qaataa baasaboorkiisa.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Hawlaha Hore
Waxa uu bilaabay xirfadiisa kubada cagta markii uu da'diisu ahayd 12 markii loo doortay ciyaaryahan kubadda cagta ah oo ka soo jeeda ciyaartoyda da'yarta ee 3000 si uu ugu ciyaaro Akadeemiyada Kubadda Cagta ee Pepsi.
Akadeemiyada kubada cagta ee Pepsi ayaa ahayd koox wakhti gaar ah oo loo yaqaano in ay u socoto Nigeria si ay u raadiso sida ugu fiican ee ay uga soo baxaan dhamaan xiddigaha mustaqbalka soo socda, tayada dhalinyarada ah ee mustaqbalka u soo guuri doona kubadda cagta. Horeba markaas Obi ayaa u taagay dhammaan dadkii daawaday. Waxaa loo doortay inuu ka ciyaaro kooxda ugu sareeysa horyaalka ee Plateau United oo sidoo kale loo yaqaano xiddigo ka ciyaara sida Celestine Babayaro, Victor Obinna, Chris Obodo iyo qaar kale oo badan oo u soo ciyaaray inay ka ciyaaraan kooxo yurub, islamarkaana matala wadankooda mustaqbalkooda. Later waxaa loo yaqaan John Obi Mikel, wuxuu ku guuleystey madaxyadiisa dalkiisa ee FIFA ee lagu magacaabo 17 World Championships oo lagu qabtay Finland. Kadib waxa uu maxkamad ku tagay South Africa oo Ajax Cape Town, Lyn Norway ka hor inta uusan ku biirin Chelsea FC. Inta soo hartay waa taariikh.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Kusoo caan bax
Xilligii xagaaga ee 2005, Mikel wuxuu u ciyaaray Nigeria sababtoo ah tartanka dhalinyarada FIFA ee lagu qabtay Netherlands. Waxa uu qabtay tartan aad u fiican ilaa Nigeria ay gaartay finalka, halkaasoo looga badiyay 2-1 Argentina. Wuxuu ku guuleystay Silver Ball ka dib markii loo doortay ciyaaryahanka labaad ee ugu fiican tartanka.
Mikel ayaa ku guuleystay U-20 Silver Football ka dib markii loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka ee 2005. Waxaa sidoo kale la siiyay abaalmarinta xiddiga da 'yarta ee Young Player of the Year ee 2005 iyo 2006. Waxay aheyd Lionel Messi oo ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican iyo gooldhaliyaha ugu sareeya.
Mikel Obi- Sida ay dhamaantood u bilaabeen
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Kala-wareejinta u dhaxeysa England
29 April 2005, maalmo yar ka dib markii Mikel uu noqday 18, Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay heshiis la gaartay kooxda reer Norway Lyn Oslo si uu u saxiixo ciyaaryahanka. Website-ka Man United ayaa sidoo kale sheegay in ay si toos ah ula soo wareegeen da 'yarta islamarkaana uu saxiixay qandaraas si uu ugu biiro.
Wakiilada Mikel ayaa isha ku haya iyadoo kooxdu ay ku qancisay da 'yarta inay saxiixdo qandaraas afar sano ah oo aan wakiil ka aheyn. Lyn Oslo ayaa loo soo diray fax uu u diray wakiilkiisa dibadda, isagoo sheeganaya in adeegyadooda aan loo baahneyn Mikel. Warar ayaa sheegaya in heshiiska uu ahaa midkii ugu horeeyay ee lagu qiimeeyo £ 4, waxaana uu arki doonaa inuu ciyaaryahanka imaanayo Old Trafford bisha Janaayo 2006.
Kooxda ka dhisan Premier League ee Chelsea, ka dib waxay soo saartay dacwad la xiriirta inay ku heshiiyeen Mikel iyo wakiiladiisa, laakiin Lyn Oslo ayaa diiday dalabkan. Si kastaba ha ahaatee, wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in Chelsea ay sheegtay inay ku lug laheyd qorshihii ay ugu dhaqaaqi laheyd ciyaaryahanka reer Europe si ay u soo saxiixato xilli danbe. Waxyaabo dheeraad ah ayaa lagu daray codsigan kadib markii la ogaaday in ciyaaryahanka uu wacdarro dhigay tababaraha Chelsea Jose Mourinho markii uu tababarka la qaatay kooxda koowaad ee kooxda intii lagu jiray xagaagii 2004.
Mikel ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay inuu United ku biiro shir jaraa'id oo degdeg ah oo la qorsheeyay, halkaasoo lagu sawiray isagoo xiran maaliyada Manchester United, kaasoo ku soo biiray number 21.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Goorta Goinga la helo Tough
Ka dib markii uu saxiixay heshiiskii uu kula biiri lahaa Manchester United, waxaa jiray sheegasho ka yimid Norway oo uu helay dhowr wicitaano khatar ah oo ka yimid ilo aan la aqoon. Mikel waxaa loo doortay ilaaliye ammaan wuxuuna u guuray hoteel ammaan ah. Si kastaba ha ahaatee, May 11, 2005, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa la waayay intii lagu jiray kulankii Norway ee Klametsrud; ma uusan soo xaadirin kulanka, lakiin waxa uu daawaday taribuunka. Inkastoo ciyaaryahanka la rumeysan yahay inuu ka tagay mid ka mid ah wakiiladiisa, John Shittu, oo haatan u duulay si uu ula kulmo Mikel, lumitaankiisa ayaa ka dhigtay warbaahin weyn oo ku taal Norway, sidoo kale waxa uu ka careysnaa baaritaan bilays ka dib markii madaxa maamulka Lyn Oslo Morgan Andersen uu sheeganayay in warbaahinta Norway ay sheegto in Mikel uu 'afduubay'. Warar soo baxayay ayaa waxaa soo laabtay tababaraha Manchester United Carlos Queiroz, kaasoo Chelsea ku eedeeyay inuu ku lug lahaa afduubka 'afduub'.
Waxaa soo baxday in Mikel uu u safray London London wakiilkiisa John Shittu. Tababaraha Manchester United Alex Ferguson ayaa u tixgeliyey inuu u safrayo Oslo inuu booqdo Mikel, lakiin waxa uu go'aansaday ka dib markii Mikel laga wariyay inuu ka tagay dalka. Inuu ku sii jiro hoteelka London, iyo sagaal maalmood ka dib ayaa la waayay, Mikel ayaa sidaasi u sheegay Sky Sports News in lagu cadaadiyay inuu saxiixo qandaraaskiisa United, taasoo sheegtay inay diiddan tahay Manchester United iyo Lyn Oslo. Mikel ayaa sidoo kale sheegay in uu weydiistay kooxo isbuuc ah inay ka fekeraan, laakiin codsigaan waa la diiday, waxaana ay kooxdu ku adkeeysatay saxiixa iyadoo aan la taliyeyaashiisa joogin. Hadalka Mikel, hadii ay run tahay, macnaheedu waa in Manchester United ay ku xadgudubtay FIFA iyo xeerarka FA. Mikel ayaa u sheegay warbaahinta Ingiriiska in Chelsea ay aheyd kooxdii uu doonayo inuu u saxiixo. Iyadoo laga jawaabayo dhacdooyinkan, United ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay FIFA oo ku saabsan dhaqanka Chelsea iyo wakiillada ciyaaryahanka, John Shittu iyo Rune Haunge, horeyba u beeninayay doorka uu ka qaatay fadeexada George Graham. FIFA ayaa dafirtay sheegashooyinkeeda bishii August 2005 isagoo sheegay in aysan jirin caddayn ku filan oo ay ku keeni karto dacwad ka dhan ah Chelsea.
Koobkii ka dib, Mikel wuxuu ku guuldareystay inuu ku laabto Lyn Oslo, kooxduna waxay u gudbisay FIFA dacwad. Bishii Ogosto 12, 2005, FIFA waxay xukuntay in Mikel uu ku laabto Lyn Oslo si uu u fiiriyo qandaraaskiisa kooxda Norwey, halka ay go'aansan doonaan waqti dambe haddii qandaraaskii uu la galay United in la hayey iyo in kale. Dib u dhac muddo bil ka badan ah, Mikel wuxuu u hogaansamay go'aankii FIFA wuxuuna ku laabtay Lyn Oslo horaantii Sebtember 2005 ka dib seddex bilood oo uu maqnaa. Halkii laga tagi lahaa FIFA si loo go'aamiyo ansaxnimada qandaraaska lala saxiixday Manchester United, Chelsea ayaa faragelin ku sameysay si mutadawacnimo ah oo ay heshiis ugula wareegi karto Lyn Oslo iyo Manchester United.
Bishii June June 2, 2006, Chelsea, Manchester United iyo Lyn Oslo ayaa gaaray heshiis lagu xallinayo mustaqbalka ciyaaryahanka. Diiwaanka Mikel waa inuu ka soo wareegaa Lyn ilaa Chelsea; Manchester United ayaa ogolaatay inay joojiso heshiiska ay kula soo wareegeyso Mikel. Heshiiskan Chelsea wuxuu ogolaaday inay bixiso Manchester United £ 12, qeyb ahaan qeybta labaad ee heshiiska qandaraaska iyo qeybtii kale ee June 2007, iyo Lyn £ 4 million, qeybtii qeybtii hore ee qeybtii hore iyo badhkii June 2007. Sababtoo ah heshiiskan, dhammaan sheegashooyinka ku jira arrintaan waa la joojiyay. Bishii July ee July 19, 2006, Chelsea ayaa loo ogolaaday ruqsadda shaqo ee ciyaaryahanka khadka dhexe ka dib markii ay dhameysteen heshiiskii 16 ee bishii June 2006.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Gudbi Diiwaangelinta
Waxa uu ku dhacay heerka ugu sarreeya ee 89.93% ee sanadihii ugu horeeyay ee 3 ee Chelsea. Tani way ka sareysaa qof walba oo ka tirsan horyaalka heerka koowaad mudadaas.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay, waxa uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka horyaalka aan waligood lumin kubada. Waxa uu ahaa kan ugu fiican ee baasas wanaagsan.
Mikel Obi Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -LifeBogger Qiimeynta
Chapman waa maskax ahaan booskiisa. Adigu ma helin deyn aad u badan oo ku saabsan shaqada uu kooxda u qabto. Waxaanu ku siinnaa kala go 'aabaha hoos ku taxan.
Waad ku mahadsantahay akhrinta xaqiiqda akhriska ee Mikel Childhood Story Plus. Fadlan fiiri agagaarida maqaalo dheeraad ah oo laga yaabo inaad wax ku darsato.
Chelsea FC Ciyaartoydii hore
Dominic Solanke Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Samuel Eto'o Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Nathan Ake Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Ashley Cole Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
John Terry Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
Michael Essien Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Xogta
Salomon Kalou Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Petr Cech Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Carlo Ancelotti Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Edin Dzeko Storyhood Plus Xaqiiqooyin Wada-hadal ah